Video: Orodyahanada Caanka Ah Ee Mo-Farah Iyo Bolt Oo Is-Balansaday… – Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Video: Orodyahanada Caanka Ah Ee Mo-Farah Iyo Bolt Oo Is-Balansaday…
Ninka ugu orodka dheer adduunka Usain Bolt ayaa xaqiijiyay inuu isku diyaarin doono inuu la ordo xiddiga orodada dhexe ee Somali -British-ka ah Mo Farah, kuwaasoo ku tartami doona ciyaar dhanka samfalka ah oo ah orodka 600 mitir.
Farah, wuxuu sanadkii tagay noqday horyaalka orodka 5,000 iyo 10,000 mitir ciyaarihii London Olympics halka orodyahanka reer Jamaica Bolt, uu qaatay biladdaha dahabka ah ee orodka 100 iyo 200 mitir. Lacagta ka soo xaroota orodkaasi waxaa lagu maalgalin doonaa ururo ay leeyihiin
Farah wuxuu shalay sheegay inuu sameystay urur samafal ah oo la yiraah Mo Farah Foundation. sidaa dartee wuxuu qalqaaliyay Bolt si uu lacag u helo isagoo ku yiri ‘diyaar ma u tahay orod? kaalay, waa in aad orodaa.’
“Waa kuma boqorku? horyaalka orodka dhexe Mo Farah iyo boqorka orodka Usain Bolt ayaa waxey ku tartami doonaan orodka 600m, ciyaar sadaqo aruurin ah,” sidaasi yiri Farah.
Bolt ayaa kaga jawaab celiyay: ‘hadalkaasi kaftan ayuu u eg yahay. Waa wax igu adag laakiin dhib ma lahan maadaama ay tahay ciyaar samafal ah marka waa iska baashaal iyo farxad. Ciyaarta wali lama sheegin xilli la ordi doono.
Wax Badan Aadan Ogeyn Ka Barro Fadliga Aay Leedahay Maalinta Jimcaha
KaLaFoGe July 2, 2016 June 30, 2016
Qisadaan Aadka Iyo Aadka U Xikmada Badan Markii Aad akhrisato Kadib Ku Qor Hoos Waxaad Ka Fahanto.
KaLaFoGe November 7, 2014 November 7, 2014
MUCJISO: Gabadh yar oo la arkay iyadoo Afkeeda ay Saacad kasta Timo kasoo baxayaan!!
KaLaFoGe May 27, 2013 May 27, 2013